Coral Reef: ကျွန်မနှင့်အိပ်မက်များ
Anonymous said on March 13, 2012 at 7:39 AM
ညိုလေးနေ said on March 13, 2012 at 7:41 AM
ဗုဒ္ဓရဲ့  တရားတော်တွေထဲမှာတော့ ကောင်းစွာအိပ်စက်ရခြင်း ကောင်းစွာနိုးထရခြင်း ဆိုတာပါတယ်။ ပြီးတော့ အိပ်မက်မက်ရတာကိုလည်း မကြိုက်ဘူး။
ဇွန့်ကိုလည်းနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပြီး လန်းလန်းဆန်းဆန်း နိုးထစေချင်ပါတယ်။
အင်ကြင်းသန့် said on March 13, 2012 at 9:02 AM
အိပ်မက်တွေကို စွဲလမ်းနှစ်သက်တတ်တဲ့ မဇွန်တစ်ယောက် ချိုမြိန်နွေးထွေးသော အိပ်မက်များကိုသာ ထာဝရမက်ခွင့်ရပါစေ....စိတ်အစွဲအလမ်းတော့ သိပ်မထားပါနဲ့ မမရယ်....မ.ခံစားနေရမှာစိုးလို့ပါ....:(
Hnit said on March 13, 2012 at 9:45 AM
ပျော်ရွှင်စရာအိပ်မက်ဖြစ်ဖြစ် ဝမ်းနည်းစရာအိပ်မက်ဖြစ်ဖြစ် တွေဝေစဉ်းစားစရာတွေနဲ့ နိုးထရစမြဲပါ။
တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းသမျှ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျပြီး နေ့သစ်တစ်ခုကို လန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြတ်သန်းစေချင်ပါတယ် ဇွန်။
Anonymous said on March 13, 2012 at 11:56 AM
ဒီနေ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ပေါ့နော်။ ဒီည.. အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေ ဇွန်။
Anonymous said on March 13, 2012 at 6:48 PM
ဥပါဒါန်ကြောင့် ဥပါဒ် ရောက်တတ်ပါတယ်..
ဒါတွေကို မဇွန် အနေနဲ့ ကောင်းကောင်းကြီး သိမှာပါ..
မိကျောင်းမင်းကို ရေခင်းပြသလို ဖြစ်နေရင် ခွင့်လွှတ်ပါ..
လူတိုင်း ညစဉ် ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်မောကျနိုင်ပြီး မနက်တိုင်း စိတ်ကြည်လင်စွာ နိုးထနိုင်ပါစေ..
Shinlay said on March 13, 2012 at 10:08 PM
:P said on March 13, 2012 at 10:37 PM
တီတီဆွိ ဘလော့ ကွန်မန့်ကနေ ရောက်လာခဲ့တယ်...
လန်းဆန်းရွှင်ပျစွာ နိုးထ နိုင်ပါစေ...။
ကြယ်ပြာ said on March 18, 2012 at 6:39 PM
ဇွန်ရေ .... အိပ်မက်တွေက တခါတလေ ကောင်းပေမယ့် တခါတခါကျတော့ စိတ်ကို ပင်ပန်းစေတယ်။ ကျန်မာရေး ဂရုစိုက်ဦးနော် သယ်ချင်း ...
Anonymous said on March 19, 2012 at 8:03 AM
မမရေ မတွေ့ တာလည်းကြာပြီနော်
ဘဝကအိမ်မက်မဟုတ်တော့ အိမ်မက်ထဲမှာချမ်းမြေ့တာမျိုးထက် အပြင်မှာလက်တွေ့ မမချမ်းမြေ့နေတာမျိုးကိုပိုလိုလားမိပါတယ်။
P.S မမ ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေ မမချစ်သူထပ်တူထပ်မျှရပြီးကျွတ်လွတ်နိုင်ပါစေ...
Anonymous said on March 22, 2012 at 11:15 AM
Just smile back....
(when I'm gone-Eminem)
သူသာ ဇွန့်ကို စကားပြောလို့ရရင် အဲ့လို ပြောလိမ့်မယ် ထင်တယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
Rita said on April 10, 2012 at 1:14 PM
ကိုယ်တော့ အိပ်မက်တွေ မက်ခဲလာတယ် ဇွန်။ ပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူး။ လူပြိန်းလိုပြောရရင် တနေရာရာမှာ gap ဖြစ်သွားပုံပဲ။
Anonymous said on August 13, 2012 at 1:30 PM
မဇွန် .... နောင့် လဲ အိပ်မက်တွေကို စွဲလမ်းတတ်တယ်။ ဥပမာ မှိုတို့ မြွေတို့ မက်ရင် စိတ်ကြည်နေပြီး ၊ ရေတို့ မီးတို့ မက်ရင် ဘုရားကြာကြာရှိခိုးတတ်တာမျိုးပေါ့။
မဇွန် ရဲ့ မောင် အကြောင်းရေးတာလေးတွေ တစ်မေ့တစ်မောဖတ်ပြီး အမြဲခံစားရတယ်။
သေသောသူ ကြာရင် မေ့ဆိုပေမယ့် မမေ့သေးတဲ့ မဇွန်ကို လေးစားပါတယ်။